UNWTO Secretary General: Heavyweight vs Kurema
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Nhau Nhau » UNWTO Secretary General: Heavyweight vs Kurema
Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Georgia Kuputsa Nhau • Dhinda Zviziviso • Spain Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Iyo ichibuda UNWTO Secretary-General Uye Izvo Zvakarongwa Zvinouya Secretary-General Sarudzo:
Heavyweights vs lightweights anokwanisa vs asina kukodzera, haina kumbonyanya kuoma kuona. Isu tese tinogona kunzwisisa chero munhu anosvika pachinzvimbo cheumwe asina kukodzera kuita mairi. Asi kwete kana indasitiri imwechete yepasi rose yakaiswa panjodzi.
Zvichida kana munhu aine yake kirabhu yebhola, mumwe anogona kutora mukana wekuhaya munhu ane zero nyanzvi yebhola kirabhu manejimendi. Sezvazvaive zvakaitika naZurab Pololikashvili, uyo aive nekatsiga kebhora kirabhu, sechikamu cheakacheka chekare. Hapana chimwe chazvo chinomukwanirisa kuti asvike nesimba, uye ichokwadi kusvika, kutungamira United Nations World Tourism Organisation (UNWTO).
Izvo zvakakodzera here kuti iyo General Assembly muChengdu, China kuvhotera musimba mutsva kunzvimbo yepamusoro yekushanya kwepasirese, neophyte isina kana ruzivo rwekushanya?
Iyi ndiyo yedu UNWTO, sangano rinoremekedzwa uye rinoremekedzwa iro rinomiririra indasitiri imwe chete yepasirese. Ngatisimudzirei bhatani rekumbomira uye tiongorore hunhu hwemunhu anozogamuchirwa kana kurambwa pamusangano unotevera 22nd UNWTO General Assembly semunyori Mukuru.
Ngatimboongororai zvekare zviviri. Kutanga iye anoyemurwa zvakanyanya, anoremekedzwa chaizvo, Taleb Rifai.
Sezvo UNWTO ari kubuda Secretary-General iye ane inoshamisa track rekodhi uye yakaratidza stellar hutungamiriri nemaoko akasimba kwazvo, anokwanisa. Iyi ndiyo CV yaDr Rifai apo iye aikwikwidza chinzvimbo cheUNWTO Secretary General.
VaTaleb Rifai vakatora mabasa a Secretary General ad interim yeWorld Tourism Organisation (UNWTO) kubvira 1. Kurume. Akashanda seMuteedzeri Secretary General kubva Kukadzi 2006 kusvika Kukadzi 2009
Asati atora chinzvimbo chake, anga ari Assistant Director weInternational Labour Organisation (ILO) kwemakore matatu akateedzana. Mabasa ake aisanganisira kutarisisa nekuzadzikiswa kweZvepasi Pose Maitiro evashandi, pamwe nekuyambira pamisika yevashandi nemitemo yekushandira, kunyanya mudunhu reMiddle East.
Kubva muna 1999 kusvika muna 2003, VaRifai vakashanda munzvimbo zhinji dzevashumiri muHurumende yeJorodhani, kutanga seGurukota reKuronga neKubatanidzwa kwepasi rose mukutungamira kweJordani Budiriro Yekuvandudza uye hukama hwenyika mbiri nehukama nenyika dzinopa pamwe nemasangano. Akazogadzwa kuve Gurukota rezve Ruzivo, mune chinzvimbo chaaive mutariri wezvekutaurirana pamwe nevezvenhau uye nekugadzirisa zvakare Jordan Television Network. Muna 2001, basa rake rakawedzerwa kuti riisanganisira Ministry of Tourism uye Antiquity.
Munguva yavo yekutonga seGurukota rezveKushanya neAntiquity, VaRifai vakasimbisa Yordani yekutanga Archaeological Park muguta rekare rePetra mukubatana neUNESCO neWorld Bank. Akaonawo akati wandei makuru mapurojekiti muJerash, Gungwa Rakafa uye Wadi Rum. SaGurukota rezveKushanya, aive zvakare Sachigaro weJorodhani Tourism Board, Mutungamiri weAmoni Chikoro cheKushanya uye Kugamuchira Vaeni uye akasarudzwa sachigaro weKanzuru yeKubata yeUNWTO muna 2001.
Mumakore matatu apfuura basa ravo muJordanian Cabinet, VaRifai vaive CEO weJordani's Cement Company, imwe yemakambani makuru epasirese munyika ane vashandi vanopfuura 4000. Munguva yake, akabudirira kutungamira uye kutungamira chirongwa chekutanga chekushambadzira nekugadzirisa hurongwa muJorodhani nekuunza kambani yesimende yeFrance Lafarge muna1998 uye akaramba achishanda saMutungamiriri pasi pehutungamiriri hutsva hweLararge.
Kubva muna1993 kusvika 1997, VaRifai vaishingairira kuisa mucherechedzo pagwara nekuvandudza nzira dzekutengeserana nekudyara, pakutanga pachigaro chavo seMutungamiriri weJordani's Economic Mission kuenda kuWashington DC inosimudzira hukama, kudyara uye hukama hwehupfumi pakati peJordani neUSA. Muna 1995 vakave Director General weSangano richangosimbiswa reInvestment Promotion Corporation, rinoona nezve kuvandudza nekushandisa marongero anovavarira kukwezva Kunze Kwekunze Investment kuJordani.
Kubva 1973 kusvika 1993 Mr. Rifai aibatanidzwa mukutsvaga, kudzidzisa uye kuita Architecture uye Urban Dhizaina muJorodhani neUnited States. Akanga ari purofesa weArchitecture paYunivhesiti yeJorodhani uye akadzidzisa makosi akati wandei muPhiladelphia, Chicago neCambridge. Semuvaki, akahwina makwikwi akatiwandei epasi rese uye akatarisa akawanda mapurojekiti, kunyanya mukugadzirisa kwenzvimbo dzekare dzemaguta.
VaRifai vakagashira PhD yavo muUrban Design uye Regional Planning kubva kuYunivhesiti yePennsylvania muPhiladelphia muna 1983, Master's degree ravo muUinjiniya neA Architecture kubva kuIllinois Institute of Technology (IIT) kuChicago muna 1979, uye BSc yavo muArchitectural Engineering kubva iyo University of Cairo muEjipitori mu1983
Mr. Rifai, wekuJordanian nyika akazvarwa mu1949, akafamba uye kudzidzisa zvakanyanya, uye akagamuchira kushongedzwa kwakasiyana kunosanganisira imwe yemenduru dzepamusoro dzeJoridani dzevashandi veveruzhinji, Al Kawkab, pamwe neakawanda ekushongedza kwepamusoro kubva kuFrance, Italy nedzimwe nyika. .
Nhoroondo yaVaRifai inobatanidza ruzivo rwakasimba rwematongerwo enyika uye ruzivo rwehunyanzvi mumunda wekushanya, pamwe neruzivo mukushanda nekushanda kweMasangano Emarudzi. Hupenyu hwake hunomupawo ruzivo rwakakura nezvehupfumi, bhizinesi uye zvedzidzo.
Muhupenyu hwake hwese hwehunyanzvi, VaRifai vanga vari mushanduri uye muvaki wekubvumirana: Hunhu hwakakosha huviri mukugadzirisa shanduko. Kukwanisa kwake kupinza kufunga kutsva uye kushanda padhuze nevanhu kuitira kuona kupinda mukati uye kuwana shanduko dzisingagumi kunoonekwa mune zvese zvaanoedza, kunyanya, kugadzirisa Jordan Television Network, kuita yeJordan Cement Company nekuunza kufunga kutsva ku UNWTO
Sezvo vakashanda seMutevedzeri Wemunyori Mukuru weUNWTO kwemakore matatu apfuura, VaRifai vakawana ruzivo rwakakosha uye nzwisiso maererano nezvinodiwa uye tarisiro yeUNWTO. Ari kutarisa mukwikwidzi akasimba uyo ane hunyanzvi hwese hwakakosha, ruzivo uye ruzivo pamwe nekugona kwekuunza shanduko dzinodiwa zvakanyanya uye shanduko kuUNWTO
Iye zvino ngationgororei Secretary-General Elect, Zurab Pololikashvili 'resume yazvino, iyo isingaratidze ruzivo rwakawanda mukati mekufamba kana kushanya.
Kabhinzi kaunda, murume wemari, uye aimbove mukuru wenhabvu, Pololikashvili haasi mubato rimwe chete naRifai, nematanho api naapi. Mambo haana hembe zvinoonekwa.
Mumiriri Anoshamisa uye Plenipotentiary yeGeorgia kuHumambo hweSpain, Hutungamiriri hweAndorra, iyo People's Democratic Republic yeAlgeria uye Humambo hweMorokota Mumiriri weGeorgia kuWorld Tourism Organisation (UNWTO)
Ambassador POLOLIKASHVILI vane ruzivo rwakazara rwekushanda munzvimbo dzakazvimiririra nedzeruzhinji pazvigaro zvepamusoro.
Ane ruzivo rwakakura rwekumirira nyika, akamiririra Georgia kuWorld Tourism Organisation (UNWTO), pamwe nekushanda seMumiriri Anoshamisa uye Plenipotentiary kuHumambo hweSpain.
Akabatawo chinzvimbo cheMutevedzeri wegurukota rezvekunze kubva 2005 kusvika 2006.
2009-2010, Gurukota rezvehupfumi. SeGurukota rinoona nezvehupfumi hweGeorgia, Mumiriri Pololikashvili aive nebasa rekutarisa nzira dzekukura kwemari kwenguva yakareba, kusimudzira kutengeserana kwekunze uye zvirongwa zvekudyara, pamwe nekusimudzira kuvandudzwa kwenzvimbo dzekushanya, zvivakwa uye zvekufambisa.
Akashanda pakuburitsa danho rekuvandudza hutarisiri kuGeorgia, achiisa pamberi pehurongwa pazvirongwa zvese zvehurumende pamwe nevezvakazvimirira.
Panguva yekutora Ambassador Pololikashvili seGurukota rezvekusimudzira hupfumi, kuburikidza neshanduko dzakakosha dzemitemo, zviitiko zvekushambadzira, kugadzirisa kwezvivakwa uye zvirongwa zvekusunungura vhiza, Georgia yakakwanisa kupeta zvakapetwa kaviri nhamba yegore negore yevanosvika kune dzimwe nyika, kubva pamamirioni 1.5 (muna 2009) kusvika kudarika 2.8 mamirioni chiratidzo na2011
Shanduko idzo dzakagadzira nzira yekuenderera mberi kwemaitiro ekushanya muGeorgia uye zvirongwa zvekudzora hurombo, zvichiisa Georgia pakati penzvimbo dzepamusoro dzevashanyi munzvimbo iyi Gurukota Pololikashvili vakabudirira kutungamira maitiro ehupfumi ehurongwa, kuunza mamwe marongero anotsigira emaSME, uye zvirongwa zvekurudzira kukwezva kudyara kwekune dzimwe nyika mukuvandudza kwezvivakwa zvakaoma uye zvakapfava.
2006 - 2009 Mumiriri Anoshamisa uye Plenipotentiary yeGeorgia kuHumambo hweSpain.
2005 - 2006 Mutevedzeri wegurukota rezvekunze kweGeorgia. Mune chinzvimbo ichi seMutevedzeri wegurukota rezvekunze kweGeorgia, akatarisa madhipatimendi ezvekutungamira, bhajeti, zvemari uye zvemumiriri, pamwe neDhipatimendi reHuman Resources Management.
Pololikashvili aive nebasa rekuunza chikamu chitsva chehurumende dzakasununguka uye dzakachengeteka, kufambisa kwemaitiro ekurerutsa nzira dzekuyambuka muganho, nekusimbisa hukama nemasangano akasiyana siyana epasirese, kusanganisira UNWTO.
Dzidza chikamu chakazvimiririra. Chiitiko chaAmbassador Pololikashvili chakazvimirira chikamu chinosanganisira makore akati wandei mumapazi ezvemari uye emabhangi, achishanda saManeja weInternational Operations yeTBC Bank (rimwe remabhanga akabudirira kwazvo kuGeorgia), Director weTBC Bank Central Central Office (2001-2005) uye iyo Mutevedzeri weMutungamiri weTBC Boka (2010 - 2011) Muna 2001 - 2011
Mumiriri Pololikashvili aive CEO weFC Dinamo Tbilisi, timu inotungamira nhabvu inodzidzisa muGeorgia. Zvidzidzo zvepamusoro.
2008 - 2009 Global Senior Management Chirongwa (GSMP), IE Bhizinesi Chikoro, Instituto de Empresa, Madrid, Spain 1994 - 1998
Bachelor's Degree muBhengi, Georgian technical University, Tbilisi, Georgia.
Yega Dhata Zuva rekuzvarwa: 12 Ndira 1977, Tbilisi, Georgia Marital chinzvimbo: Akaroora uye ane vana vatatu
Mitauro: ChiGeorgian (chizvarwa) Chirungu, Spanish, uye Russian (inonzwisisika) French, Japan nePolish (inotaurwa)
Isu tinotenda UNWTO yedu inokodzera kutarisirwa, kutungamirwa uye kutungamirwa neyakavimbika nyanzvi yekushanya, kana isiri nyeredzi. Mumwe munhu anozivikanwa zvakanyanya neindasitiri yedu seanokwanisa kwazvo kutora hutongi hweUNWTO yedu.
Seindasitiri, ine mvura isina kugadzikana uye mhirizhonga yapararira pasi rose, tiri kuvimba neGeneral Assembly iri kuuya kuti isangobvuma Secretary-General Elect. Mumwe haakwanise kunyepedzera kana kukanganisa ruzivo, tarenda kana hutungamiriri hwechokwadi.
Mvura izvozvi yakawandisa kupfuura iyo yakasviba yeGeneral Assembly muChengdu, China mwedzi unouya.
Kuunzwa kwaPololikashvili saMunyori-Mukuru Elect hakusi kwega kwakaringana kubvumidza kusimbiswa nenyika dzinovhota. Tinokurudzira iyo General Assembly yekuvhota kutora kwenguva refu, yakaoma kutarisa basa reUNWTO Secretary-General. Izvo zvakakosha, zvakakosha. Tinoda uye tinoda mutungamiri weUNWTO wedu anozove nechiratidzo, kungwara, kugona, ruzivo, ruzivo, simba, uye hushingi hwekutungamira nekutitungamira pamwe chete seindasitiri.
Tiri kuvimba nazvo.